कसरी स्वाद, रङ, भिटामिन संरक्षण गर्दा, राम्रो बीट खाना पकाउनु, चाँडै
यो कुनै विशेष ज्ञान आवश्यक छैन भनेर जस्तो सबै पाक चाल र खाना पकाउने तरकारी को रहस्य बीचमा र पनि अधिक पूर्ण नजान्ने, साईट mistresses विषय हो थियो। सबैले तथापि, यस्तो खाना पकाउने वा उज्ज्वल, संतृप्त रंग कुनै दोष नभएको, borscht वा सकरखण्ड विशेषता लागि सलाद बीट रूपमा, त्यसैले सरल? र कारण hrustinka वर्तमान र लोच गर्न, र भिटामिन संरक्षित छन्।
को बीट यसको आधारमा तयारीको लागि उसिनेर गर्नुपर्छ भने, वा सलाद मा एक अतिरिक्त संघटक रूपमा: एक फर कोट अन्तर्गत सबै आफ्नो मनपर्ने माछा, आदि को लागि, एक परम्परागत सलाद, स्याउ संग, लसुन सस संग, जडीबुटी र तेल संग सुगंधित, तपाईं एक उज्ज्वल तरकारी प्राप्त गर्न आवश्यक , केही rigidity। पर्याप्त ठोस (vinaigrette) वा, वैकल्पिक, मुलायम (कोट)। rigidity संरचना inhomogeneity, फीकापन - त्रुटिहरू को सबै भन्दा साधारण प्रकार बीट पकाएको गर्दा। को बीट क्रममा राम्ररी पकाउन तिनीहरूलाई बच्न? निम्नानुसार:
- तातो पानी चिसो पानी, छैन मा सिफारिस गरिएको मूल बिछाउने। को उम्लिरहेको पानी पनि स्वीकार्य छ, तर भिटामिन त छिटो र अधिक नष्ट छन्।
- पानी बस तरकारी कवर गर्नुपर्छ, एकै समयमा यो आवश्यक पानी स्तर निगरानी र तरकारी पूर्णतया पानी मा निवास गर्नुपर्छ रूपमा समय-समयमा चिसो पानी थप्न छ।
- पकाउने समयमा धेरै मूल तरकारी, तिनीहरूले आकार र वजन गर्न लगभग बराबर हुनुपर्छ।
- चुकंदर पुच्छर छोट्याउन सकिन्छ।
- यो जरा जस्ताको तस्तै चयन गर्न, तिनीहरूलाई राम्ररी दूषण देखि निर्लज्ज खाना पकाउने अघि सफा मनपरेको।
- एक पुरा (सूप लागि) को रूपमा खाना पकाउने लागि चुकंदर को सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट फारम - लम्बी सिलिण्डर, गहिरो रातो, मीठो।
- कम गर्मी मा खाना पकाउन आड seething अनुमति गर्नुपर्छ।
- बीट पकाउन कसरी लामो unequivocal सिफारिस, कुनै। यो सबै कठोरता को इच्छित डिग्री मूल आकार मा निर्भर गर्दछ। औसत मा, प्रक्रिया 40 मिनेट देखि एक घण्टा गर्न, ठूलो राउन्ड मूल तरकारी र थप लिन्छ।
- एक चक्कु, एक दांत कोट्याउने सिन्का (प्वाल पार्ने काम) - को कोमलता जाँच र इच्छुकता परम्परागत हुन सक्छ। एक सामान्य नियम जस्तै, चुकंदर यदि एक चक्कु संग मूल आफ्नै स्लाइडहरू, यो आवश्यक छैन मिलाउ निश्चित तयार छ। त्यो केवल यो हरेक चार पटक तत्परता जाँच गर्न आदर्श मिनेट गर्न लायक छ। अन्यथा, सम्पूर्ण मूल istykan, रस गिरा, चमक र निष्ठा हराएको छ। यो परेशान छैन बीट 40 मिनेट, फल सानो छ या तपाईं एक सानो कठोर, कुरकुरा संरचना आवश्यक जब तपाईं, तत्परता जाँच गर्न सक्छन् जो पछि लागि खाना पकाउन, सजिलो हुनुपर्छ।
- बीट खाना पकाउने लागि नुन पानी छैन पहिलो स्थानमा आवश्यक यो छ लगभग बेकारी छ, र दोश्रो, केहि तरकारी को स्वाद असर गर्न सक्छ।
- अक्सर त्यहाँ रंग संरक्षण गर्न आवश्यकता हो, कसरी उज्ज्वल र सुन्दर बीट खाना पकाउनु छ? को उसिनेर पानी रंग acidified वा मीठा गर्न सकिन्छ संरक्षण गर्न। एक तरल को3लिटर (तरकारी को मात्रा बाहेक) मा सिरका वा कागति को रस वा चिनी को चमचा को एक जोडी थप्नुहोस्। उपयुक्त र साइट्रिक एसिड वा अमिलो उमालेर बनाउनु।
- हार्ड वेयर आवश्यकता भौतिक हुँदैन लगाएको छ, यो शोरबा प्राप्त र धनी रंग छ बुझ्नुपर्छ। तर, यो एक धातु कन्टेनर मा खाना पकाउनु सिफारिस गरिएको छैन। मांग को आकार, साना बेकारी कन्टेनरको राशि, राम्रो छ द्वारा। आदर्श, ढकने तरल सतह देखि केही सेमी रहनुपर्छ।
- खाना पकाउने बीट केही peculiar गन्ध प्रस्तुत गर्दा प्राप्त सिर्फ एक पैन रोटी पाप्रो मा राख्दै गरेर छुटकारा।
तयार चुकंदर गर्न सजिलै र चाँडै यो rinsed गर्नुपर्छ खाना पकाउने वा चिसो पानी मा 8-10 मिनेट कम पछि साफ। तरकारी अरु देखि अलग कुक र तयार कटा स्लाइस / चुकंदर रंग संरक्षण र बाँकी सलाद सामाग्री माथि रंग गर्न चिकनाना कुनै पनि वनस्पति तेल dices।
तिमी धेरै छिटो छ बीट पकाउन गर्न चाहनुहुन्छ भने, उसिनेर र खुली जरा कटा गर्न सकिन्छ। कसरी गर्ने बीट पकाउन चाँडै? कम्तिमा पानी, एउटा सानो कन्टेनर, मुख्य कुरा, ढक्कन बन्द। 15 मिनेट यसलाई Suffice। पछि उम्लिरहेको पक्कै सिरका एक spoonful थप्न र मिश्रण गर्नुपर्छ - रंग पुनर्स्थापित भएको छ। सलाद लागि चुकंदर जोश गर्न सक्नुहुन्छ / माइक्रोवेव ओवन, स्ट्यु, एक पारंपरिक ओवन मा ग्रील्ड मा पाक्नु।
को गाढा दूध कसरी खाना पकाउनु। मीठो दाँत सुझावहरू।
उम्दा खाना: बीफ जिब्रो, पकाउने
ब्याजर बोसो कसरी हीट: चरण निर्देशनहरूको द्वारा कदम। को ब्याजर बोसो कसरी प्रयोग गर्ने
कसरी घर मा रातो माछा अचार गर्न? यो सजिलो छ!
अवधारणाहरु को प्रकार: सबै लागि तर्क
वसन्त को पहिलो फूल। पहिलो वसन्त भेट्नु के बिरुवाहरु?
ट्यांक सुझाव आकर्षित गर्न कसरी
शैली र गीतहरू प्रकार
कलेजो संग स्वादिष्ट Pies खाना पकाउने
को भित्री भान्सा सिपल color: एक अवलोकन, रोचक संयोजन र समीक्षा
सोभियत संघ Konstantin Zaslonov को नायक